Ny emulator PSP ho an'ny iOS tsy misy jailbreak dia havaozina | Vaovao IPhone
Ireo emulator nandritra ny tantaran'ny iOS dia nanana dia sarotra, raha tsy hilaza afa-tsy ny kely fotsiny: fantatry ny rehetra ny an'ny Apple - indraindray marary - maniry hitazona ny zava-drehetra hifehezana, indrindra raha mikasika ny fampiharana, satria misy developer maniry te hahazo ny fankatoavana. Apple dia tokony handray ny zioga apetraky ny App Store. Ary ity, mazava ho azy, mifandona an'ity karazana tetikasa ity, izay angamba ny olana dia tsy dia hoe emulateur izy ireo fa ny zava-misy, ankolaka, misy toerana fampidirana atiny izay tsy nandalo ny fibaikoana mivantana ny orinasa. Na izany na tsy izany dia mazava ny zava-misy: tsy raisina ny emulator.
Noho izany, ireo izay te-handingana io veto io dia voatery tongava amin'ny fomba isan-karazany indrindra hanatratrarana azy: ireo nentim-paharazana kokoa tamin'ny alàlan'ny jailbreak ary, tato ho ato, mampiasa tetika toy ny fanovana ny datin'ny fitaovana hitrandrahana ny fahalemen'ny iOS.
Na izany aza, ny entinay anio dia emulator PSP izay nohavaozina mba tsy hiankina amin'ny fitsambikinan'ny fotoana toy ny sarimihetsika valopolo taona: mitondra ny PPSSPP, ankoatry ny zava-baovao hafa. ny fahaizana mametraka raha tsy mila fepetra hafa ankoatry ny fananana fitaovana mifanaraka aminy mihazakazaka eo ambanin'ny iOS 8 (na kinova hafa hatramin'ny iOS 5). Mazava ho azy, nomarihin'izy ireo fa azo atao ny mijaly miadana ny fampiharana amin'ireo terminal ireo izay tsy misy ny jailbreak.
Ny fametrahana azy dia tsotra be: ampidiro fotsiny ny pejin'ny tetikasa iemulator, mandehana any amin'ny Apps ary apetaho PPSSPP. Vantany vao vita izany, hampahafantatra ny roms (izay tsy maintsy atao amin'ny endrika ISO na CSO) afaka mifangaro amin'ny iTunes fotsiny isika na mampiasa mpitantana rakitra amin'ny alàlan'ny jailbreak.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny emulator PSP ho an'ny iOS, PPSSPP, dia nohavaozina
Ao anatin'ny fikirakirana ny fampiharana dia misy safidy maromaro napetraka izay toa azo alamina ka mihamalefaka kokoa ny lalao.
Ny ohatra azoko omena anao amin'ny Patapon 1 mihazakazaka amin'ny iPhone 6
Mametraha emulator PPSSPP amin'ny iPhone tsy misy jailbreak